चीन फोन स्क्रीन क्लीनर कारखाना र निर्माताहरु एसजेजे
सबैको फोन दैनिक लुगा र आँसु बनाए, र लगातार स्पर्श मोबाइल फोन दाग हुनेछ, र फोहोर को निर्माण समय समयमा सफा गर्न आवश्यक छ। र कसरी तपाइँको स्मार्टफोन सफा गर्न को लागी तपाइँ आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ? तपाइँ संग हाम्रो स्क्रीन वाइपर र चिपचिपा स्क्रीन क्लीनर को उपयोग गरेर यो जनसंपर्क समाधान गर्न सक्दछ ...
सबैको फोन दैनिक लुगा र आँसु बनाए, र लगातार स्पर्श मोबाइल फोन दाग हुनेछ, र फोहोर को निर्माण समय समयमा सफा गर्न आवश्यक छ। र कसरी तपाइँको स्मार्टफोन सफा गर्न को लागी तपाइँ आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ? हाम्रो स्क्रीन वाइपर र तपाइँ संग चिपचिपा स्क्रीन क्लीनर को उपयोग गरेर यो समस्या को समाधान गर्न सक्छ।
चिपचिपा स्क्रिन क्लीनर अल्ट्रा ठीक माइक्रोफाइबर कपडा बाट बनेको छ, सजीलै तेल, फोहोर र फिंगरप्रिन्ट सुरक्षित स्क्रीन बाट हटाउन सक्छ। यो धोईन्छ र धेरै समय को लागी पुन: उपयोग गर्न सकिन्छ। हामी पनी स्क्रिन वाइपर को अन्य प्रकार को सफा को रूप मा microfiber संग टुक्रा टुक्रा संग नरम पीवीसी र पु छाला बाट बनेको छ। न केवल सबै समय मा फोन सफा गर्न सक्छ, तर यो पनि सामान को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
स्क्रीन क्लीनर, मोबाइल फोन स्ट्यान्ड र मोबाइल फोन आकर्षण को रूप मा प्रयोग गरीन्छ
कस्टम लोगो उदात्त, मुद्रित, एम्बॉस्ड र रंग भरिएको द्वारा बनाईएको।
धुने, टिकाऊ र पुन: प्रयोज्य
संलग्नक: मोबाइल स्ट्रिंग, वसन्त कर्ड, लोचदार तार, बल चेन, कीचेन, आदि
अनुकूलित आकार, आकार, रंग र डिजाइन स्वागत छ।
अघिल्लो: फोनको पट्टा
अर्को: फोन आकर्षण